Fomba fahandro fototra: aioli na aioli | ThermoRecipes
Fomba fahandro fototra: aioli
Saosy5 minitraOlona 4250 kaloria
Misy zavatra nentim-paharazana kokoa ve ao amin'ny gastronomy misy antsika noho ny lovia vary tsara miaraka amin'ny aioli an-trano tsara? Resipeo matsiro tsara izay miaraka amin'ny lovia tsy tambo isaina, fa ambonin'izany rehetra izany dia ny lovia vary, fideuá na mofo mivantana. Fifaliana!
Fantatray fa manome anao olana ity fomba fahandro ity satria nanoratra taminay ianao nilaza fa tapaka io ary tsy mamatotra tsara. Noho izany androany izahay dia mitondra ny horonan-tsary ho anao mba hahafahanao mahita ny fomba fanaovana azy ary tena, raha manaraka ireo dingana hita ao amin'ny horonantsary ianao dia ho lavorary amin'ny voalohany.
Ary raha tapaka izy dia aza ariana !! Misy ny fomba fanamboarana azy io na ny fampiasana azy io indray. Etsy ambany kely dia azonao ny antsipiriany rehetra 😉
Avelanay ihany koa ianao ambanin'ny dikan-teny hafa nomanin'i Ana Valdés (tonian-dahatsoratry ny Thermorecetas taloha) izay nanipazany atody atody.
1 Fomba fahandro fototra: aioli
2 Torohevitra ho an'ny aioli tonga lafatra
3 Inona no ataoko raha tapaka ny aioli? Aza ariana!
4 Aioli an-trano miaraka amin'ny atody atody
Ny menaka aioli, aioli na tongolo lay malaza namboarina tamin'ny thermomix
Fotoana hiketrehana: 5M
Fotoana manontolo: 5M
Tongolo lay 20 voadio (tongolo gasy eo amin'ny 4 eo ho eo)
25 g ny menaka oliva virijina
Ranom-boasarimakirana 10 g
Menaka tanamasoandro 125 g
Izahay dia mandanja ny menaky ny tanamasoandro amin'ny tavy sy ny tahiry.
Ataovy ao anaty vera ireo jirofo vita amin'ny tongolo lay, voasarimakirana, menaka oliva virijina ary sira. Nandresy izahay nandritra 3 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampidininay ny sisa tavela izay tavela tamin'ny rindrin'ny vera ary nokapohinay indray nandritra izany 1 minitra, hafainganam-pandeha 7.
Ampidininay indray ny sisa tavela, afangaro ary avereno 1 minitra, hafainganam-pandeha 7.
Apetrakay ny lolo ary andaminay 3 minitra, hafainganam-pandeha 4. Izahay dia manidina kely amin'ny sarom-bilany tsikelikely ilay menaka malefaka, amin'ny kofehy, ka mihetsiketsika izy ary milatsaka tsimoramora ao anaty ny noo mandritra ny 3 minitra.
Esorinay ny lolo. Miaraka amin'ny spatula, ampidinintsika mankany amin'ny farany ambany ny vera ny aioli ary afangaro ihany 10 segondra, hafainganam-pandeha 2,5.
Mametraka sambo sosy izahay ary manompo eo no ho eo na mandraraka ao anaty siny tsy misy rivotra ary hitazona ao anaty vata fampangatsiahana.
Satria tsy manana atody izy io, dia fomba fahandro mety indrindra hanomanana mandritra ny fahavaratra. Azontsika atao ny mitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 5 andro tsy misy olana.
Torohevitra ho an'ny aioli tonga lafatra
Misy zavatra 2 tsy maintsy ataonao mba hivoahan'ny aioli tonga lafatra:
Torotoroy amin'ny menaka oliva ny tongolo lay im-betsaka araka izay ilaina mandrapaha manana paty. Izahay dia nanakorontana azy hatramin'ny in-3, nampidina ny sisa tavela tamin'ny rindrina ka hatramin'ny lelany ary manomboka indray.
Ampio ny menaka amin'ny kofehy, mandany ny 3 minitra maharitra ny emulsion miaraka amin'ny siny manidina ny menaka miadana sy tsy mijanona. Izay no lakilen'ny famoahana azy ary tsy tapaka. Raha manary azy tampoka isika dia tsy hahomby izany. Mila manana faharetana kely ianao (ho reraka ny sandrinao, azo antoka!)
Inona no ataoko raha tapaka ny aioli? Aza ariana!
Raha manaraka ny dingana araky ny fisehoany ao amin'ilay horonantsary dia inoana fa tsy hokapaina izany. Saingy indraindray mety hitranga izany, indrindra raha manana, ohatra, menaka mangatsiaka be isika (ary tsy voafatotra tsara). Raha ny tokony ho izy dia tokony amin'ny hafanan'ny efitrano ny zava-drehetra.
Raha tapaka ianao Aza ariana mihitsy !! Ataovy izao manaraka izao:
Ampitao amin'ny fantsom-pifamoivoizana am-paharetana ilay fangaro voapaika. Ny tongolo lay dia hijanona ao amin'ny saringan sy ny menaka ao anaty fitoeran-drano.
Apetrakay ao anaty vera indray ny tongolo lay miaraka amin'ny menaka 25 g izay ananantsika ao anaty kaontenera.
Manaraka ny fomba fahandro indray tsikelikely izahay.
Raha tapahina indray Aza ariana koa !! Raha manjo anao fanindroany io, ny hataonay dia ny fampiasana indray ireo akora mitokana. Vonoinay am-pilaminana izy io ka tafasaraka amin'ny menaka ny tongolo lay.
Hampiasa ny paty tongolo lay ho an'ny resipeo hafa izahay, toy ny: gula sasany misy tongolo lay, paty sakamalao, Chard galisiana… Na ho hanendasana vary na legioma.
Hampiasa ny menaka handrahoana fomba fahandro hafa izahay, ohatra, ny fanendasa ovy, akoho na trondro fandrahoana ao anaty lafaoro na varoma, legioma sasany ... saika azo atao na inona na inona.
Aioli an-trano miaraka amin'ny atody atody
Mpanoratra: Ana Valdés
Antsoina hoe Aioli o menaka tongolo lay (Dikan-teny Espaniola ny voalohany allioli) ary iray amin'ny antsika saosy Malaza kokoa. Ny tany am-boalohany dia voafatotra amin'ny feta, miaraka amin'ny mallet, na eo amin'ny takelaka aza, misy tsofoka. Ny raiko dia nampianatra ahy fony mbola kely aho nanao izany tamin'ny tongolo lay, menaka ary sira (toy ny purista indrindra), ary teo no nanoloranao ahy ny antsim-bilona tao anaty feta, reharehan'ny rehetra fa nivoaka mafy be izy io.
Ny marina dia tiako ny tsiro omen'ny atody atody azy tsara kokoa, toy ny ataontsika any Valencia. Ary ity no kinova izay entiko anao ho an'ny Thermomix, miaraka amin'ny atody atody, tongolo lay, menaka ary sira (tsy ny atody iray manontolo, azafady, saosy hafa hafa io). Ary miresaka saosy, efa nanandrana azy ve ianao miaraka amin'ny zavokà
Tongolo lay 2 tongolo lay (ny sahy azonao tratrarina 3, ary ireo izay tsy tia masiaka dia azonao apetraka 1 fotsiny)
Menaka oliva virjiny 50 ml (antsasaky ny kaopy)
Yolk atody 1 (zava-dehibe ny tsy mangatsiaka, amin'ny hafanan'ny efitrano izy)
Menaka oliva malefaka na menaka tanamasoandro 100 ml
Napetrakay tao anaty vera ireo jirofo vita amin'ny tongolo lay, ny atody atody, ny menaka oliva virijina ary ny sira. Nandresy izahay nandritra 2 minitra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Ampidininay ny sisa tavela izay tavela tamin'ny rindrin'ny vera ary nokapohinay indray nandritra izany 30 segondra amin'ny hafainganam-pandeha 5.
Izahay dia mametraka ny lolo, manarona ny vera amin'ilay tumbler ambony ambany sy programa hafainganam-pandeha 4, tsy misy fotoana. Mandraraka ny sarom-bilany tsikelikely amin'ny menaka malefaka izahay, mba hikorisa ary hianjera tsimoramora ao amin'ny nozera. Haharitra vitsivitsy izany 2 minutos.
Ary efa vonona.
Fanazavana fanampiny - Avocado aioli
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Sakafo rezionaly, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 15 minitra, Saosy, Vegan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Thermorecetas » Resipeo thermomix » Saosy » Fomba fahandro fototra: aioli
Ny recette aioli mahafaty !! Tsy azoko mihitsy ary narahiko tsikelikely ilay recette… nataoko ilay tao amin'ilay boky dia nivoaka ilay izy. Mila manampy voasarimakirana aho, manome fotoana bebe kokoa… tsy hitako !! Tandremo, misy manao an'io
Mamaly ny hazo fijaliana
Ny recette aioli tany am-boalohany dia tsy misy voasarimakirana ... ankehitriny, raha te-hitafy azy ianao dia afaka manao izany.
Ny aioli dia manana ampahany roa manan-danja, tsy maninona na ny tananao no anaovanao azy na amin'ny Thermomix. Ny voalohany dia ny fifangaroan'ny tongolo lay, yolk ary menaka dia tsy maintsy afangaro tsara. Ny faharoa dia ny menaka ambiny tsy maintsy ampidirina tsikelikely, tsy maimaika. Miaraka amin'ny Thermomix dia mora be izy satria apetraka amin'ny sarom-baravarana ary milatsaka ary emulsifié tsikelikely.
Ankoatr'izay, ny zavatra niainako dia milaza amiko fa ny mari-pana amin'ireo akora ilaina ihany koa. Ka tsy mampiasa atody vao avy amin'ny vata fampangatsiahana aho. Raha ny marina, imbetsaka aho dia tsy mitazona azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana.
Manoro hevitra anao aho mba andramo izany… na iza na iza mety hanana andro ratsy!
Ahy dia hoy izy:
Mitovy amin'ireo fanehoan-kevitra teo aloha izay tsy novakiako. Mandrosoa. Rano rehetra.
Ny lafy ratsy dia tsy nisy atody tao anaty vata fampangatsiahana. Iray ihany no navoakako ary lany tamin'i Ali Oli sy mofo vaovao izahay.
Valio ny tenako
Salama Yoi, miala tsiny izahay fa tsy nety taminao izany. Zava-dehibe tokoa raha eo amin'ny maripanan'ny efitrano ny akora rehetra, angamba nangatsiaka loatra ny atodinao. Zava-dehibe tokoa ny fampidiranao ny diloilo amin'ny kofehy, izany hoe, saika mitete isan-jato. Mila manam-paharetana ianao amin'ny fanaovana an'io fomba fahandro io. Aza kivy ary manandrama indray. Tsy ho ela dia hanao horonantsary amin'ity resipeo ity izahay mba hahitanao ny fomba hanaovana azy. 🙂
Fatal, maharary fa tsy nieritreritra ny hamaky ny famerenana teo aloha aho?
Toy izany koa no nitranga tamiko, narahiko tsikelikely ny recette, noroahiko nivoaka ny vata fampangatsiahana ilay atody fa tsy nampifandraisiko, voatery nariako ary namboariko ilay tao anaty boky.
Miala tsiny fa tsy nivoaka ny recette. Ekeko fa tsy fomba fahandro mora izany, na dia mety toa izany aza, fa raha miasa ho anao ilay ao amin'ny boky ... aza misalasala mampiasa azy.
Asun dia hoy izy:
Salama!!! Eny, tena nanjary tsara ho ahy io, ilay ao amin'ilay boky ihany koa, fa raha ny fahitako azy dia mitovy kokoa amin'ny mahazatra hatrany!
Valiny tamin'i Asun
Marina tanteraka ianao Asun. Fomban-drazana kokoa io fa samy mampiasa izay tiany ny tsirairay !!
Fahafatesana ity fomba fahandro ity…. tsy niakatra mihitsy…. ary ny fangaroiko dia tsy tao anaty vata fampangatsiahana…. Mahamenatra aho izao fa tsy maintsy manao hafa…. 🙁
Miala tsiny aho fa tsy nahazo an'ity fomba fahandro ity ianao. Ny marina dia tsy fomba fahandro mora. Toy izany koa rehefa vita tanana. Nijery olona nanao aioli nandritra ny taona maro aho ary afaka milaza aminao fa indraindray tsy misy fanazavana dia manapaka.
Raha manana fomba fahandro ho an'ny aioli izay tsy mety diso ianao dia tiako izany raha zarainao aminay.
Mirary fety sambatra!!
Tsy nety tamiko ilay izy ary tao anaty hafanan'ny efitrano ny akora, ary niadana ihany koa aho, na izany aza tsy nisy lolo dia nivoaka tonga lafatra
Tokony ho efa novakiako ireo hevitra ireo ... mahafaty! Naharitra 10 minitra aho satria nitandrina tsara ary te hanao azy miadana miadana ary tsy misy ... rano rehetra.
Nandritra ny taona maro dia nanolotra fifaninanana aioli aho izay andraisan'ny mpikarakara tokantrano sy olona za-draharaha anjara. Ny zava-misy dia ... indraindray tapaka koa izy ireo. Toy ny mayonnaise io, tsy resaka resipeo no resahina satria nohavaozina sy marina. Mitranga fotsiny izany!
Mifalia amin'ny manaraka !!
Fahafatesana ... zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, tsy maintsy hitako ny hevitra novakiana ... Ankehitriny hanary azy io ary handany fotoana ...
Maria José dia hoy izy:
Marina ny anao fa tsy mivoaka tsara io resipeo io, fa ny tena mahaliana dia tsy hitan'i Mayra Fernández Joglar fa misy lesoka lehibe resahina satria ny menaka totaliny dia tokony ho 250 gr. ary tsy ilay 150 grama izay lazainy, ka tsy ampy 100 grama izay no mahatonga azy ho feno vatana fa tsy be ranoka.
Valiny tamin'i Maria José
Loza izany! tavela tamin'ny andrana tsy nahomby 🙁
Nanaraka ny dingana rehetra aho, na dia mba hahazoana antoka fa tao amin'ny hafanan'ny efitrano ny atody dia nangoniko avy tao amin'ilay akoho vavy, napetraka vao; Novakiako ny fanehoan-kevitra ary toy ny momba ny fomba fahandro aseho eto, tsy nivoaka izy, nanomboka nampihatra fanovana voamarina tao amin'izy ireo aho ... rehefa ela ny ela satria tsy nahazo tsy fitoviana aho dia nanapa-kevitra ny hanary azy io ary manaova ny recette avy amin'ny boky thermomix izay nivoaka voalohany nefa tsy nisy olana.
Lala dia hoy izy:
Rano rehetra, hanary azy. Aza manao izany. Azonao esorina ny fomba fahandro.
Valio i Lala
Salama Lala, hamoaka horonantsary miandalana amin'ny aioli izahay. Resipeo sarotra io satria mila mitandrina tsara ianao rehefa manampy ny menaka. Tena tsy maintsy apetrakao amin'ny tsipika izany, raha tafahoatra isika dia manapaka. Na izany na tsy izany, raha tapahina izy dia sakano izy, saraho ny tongolo lay amin'ny menaka ary avereno ao anaty vera ilay tongolo lay ary ampio ny menaka ao amin'ilay kofehy indray. Io no fomba sitrana aminy.
Salmon misy steamed style Nordic
Vary aziatika misy voanjo, bacon ary ham